Iliso | News24
Abanye babasebenzi baxakekile egadini.UMFANEKISO: UNATHI OBOSE
Ukhuthaza ulimo ukulwa indlala ne ntlupheko umbutho wesisa ozimeleyo Iliso Care Society yaseSite C.
Lo mbutho, no neenkqubo zophuhliso ezahlukeneyo ekuhlaleni, uthi eyona njongo yawo kuku khuthaza uluntu ukuba luvuke luzenzele. Kungoku nje umaxhaphetshu utyala uthotho lwe mifuno ukuzama ukugxotha ikati eziko.
Amalungu amathathu alo mbutho athe aqalisa igadi yemifuno kwi sikolo samabanga aphantsi i Encotsheni, kwinyanga yoMqungu, emva kokuthi xha iminyaka emibini ngenxa yokumoshwa yi migewu.
Ecacisa ngokuqala kwabo eli phulo, uNtombothando Tusani uthe baqala ukulima ngomnyaka ka 2006. Baqhube neli phulo de kwaba ku kunyaka ka 2016.
Uthe injongo yabo kukuzama ukuncedisana nephulo labo lokuphekela abantu abadala ekuhlaleni.
“Iliso inenkqubo ezininzi ezenzayo ukuzama ukuphuhlisa ukuhlala, kuquka uphekela abantu abadala, ukugcina abantwana abancinci, ukuphuhlisa abantu abangoomama, nokuncedisa abantwana kwizifundo zabo ezikolweni,” utshilo uTusani.
Woleke ngelithi ukulima imifuno kubanceda bonge imali. “Ngoku akukho mfuneko yokuba sithenge yonke into ngoba uninzi lwezinto esizisebenzisayo siyazilimela,” utshilo.
Phakathi kwezinye izinto batyala ikhaphetshu, itswele, iminqatha kunye nesipinatshi.
U-Tusani uthe umnqweno wabo kukuba bayandise le gadi balime neminye imifuno. Ukwacele inkxaso eluntwini ngelithi banqwenela ezinye izixhobo zokusebenza.
“Eyona nto imandla kukunqongophala kwamanzi ngenxa yokungabinampompo,” utshilo. Ixesha elininzi uthe baye banyanzeleke ukuba bathuthe amanzi ngeembombozi njengoko bengena lungelo lakusebenzisa amanzi esikolo.
Uthe banqwenela inkxaso nokuba bangafakelwa umpompi, i bore hole ngolwimi lwase mzini. “Siyazidinga neempahla zokusebenza, kwaye ne mihlakulo imbalwa,” utshilo.
U-Nico Falten, osebenza ngaphandle kwentlawulo, uthe uqale ukuba yinxalenye yalamalungu kwinyanga ezine ezidlulileyo.
“Emva kokuhlala ixesha elide ndingaphangeli ndiye ndagqiba ekubeni ndibe nento endiyenzayo ndingahlali nje. Nangoku ngalomzuzwana ndifunde lukhulu ngendlela igadi ephathwa ngayo nangohlobo ezikhuliswa ngalo izityalo,”utshilo uFalten.
Uthe rhoqo ukusuka ngoMvulo uyakuma ngoLwesihlanu baqala ukusebenza ngentsimbi yesibhozo kusasa de ibe yintsimbi yesihlanu malanga. “Asiphangeli ngempelaveki naxa izintsuku zeholide,”ucacise watsho wongeza ngokubongoza ulutsha ukuba luvuke luzenzele.
Daily Lotto: No jackpot prize from Thurday's draw 19 minutes ago Click here for the full list of lottery results